Ny tanànan'i Granada dia voafidy ho tsara indrindra any Espana | Vaovao momba ny dia
Ny tanànan'i Granada dia voafidy ho tsara indrindra any Espana
Maria | | Tanànan'ny Espana, Granada
Ny Espaniola dia tia an'i Granada. Ity no azo tsoahina avy amin'ny valiny azo tamin'ny fifaninanana iray izay nokarakarain'ny tranonkalan'i Espana tamin'ny tambajotra sosialy. Tamin'ny famaranana lehibe natao andro vitsy lasa izay, tsy maintsy niatrika an'i Córdoba izy, tanàna iray hafa any Andalusia feno hatsarana sy hatsarana, saingy vato aman'arivony sy an'arivony (39.456 hatramin'ny 23.834) no teo anilany.
Saingy, inona no tsy maintsy asehon'ity tanàna Espaniola ity amin'ny tenany amin'ny fomba hentitra amin'ireo tanàna sisa tavela? Ny marina dia i Granada sy ny faritaniny dia toeram-pizahan-tany manan-tombo izay manome fahafaha-manao betsaka ho an'ny mpandeha mitsidika azy amin'ny fomba fijery ara-kolontsaina, voajanahary, fanatanjahan-tena ary gastronomic.
Raha manana anaram-boninahitra farany nomena an'i Granada ho tanàna tsara indrindra any Espana ianao, manana faniriana tsy hay tohaina ny hahalala azy, dia hamerina hijery ireo toerana malaza indrindra amin'ity tany Espaniola mahafinaritra ity izahay.
1 Ny Alhambra an'ny Granada
3 Katedraly Granada
4 Ny Bañuelo
6 Granada gastronomy
Raha fantatra amin'ny zavatra manerantany i Granada dia ho an'ny The Alhambra. Ity firavaka espaniola espaniola ity dia natsangana teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX tamin'ny andron'ny fanjakan'ny Nasrid ho tanàna palatine sy fiarovana mimanda miaramila fa Trano Fanjakanana Christian koa io mandra-panambarana azy ho tsangambato tamin'ny 1870. Tamin'izany fomba izany, ny Alhambra dia nanjary mpizahatany manana ny maha-zava-dehibe azy ka natolotra ny Fahagagana Vaovao fito eran'izao tontolo izao aza.
Tamin'ny volana Mey lasa teo, notoloran'i Tripadvisor an'ity tsangambato Espaniôlôjia tandindona ity ny mari-pankasitrahana 'Choice TM Choice TM' ho an'ireo toerana mahaliana amin'ny toerana faharoa eo amin'ny firenena, fahavalo eran'izao tontolo izao ary fahefatra any Eropa.
Amin'ny alàlan'ny Espaniola 'alhambra' dia midika hoe 'trano mimanda mena' noho ny loko mena izay azon'ny trano rehefa nilentika ny masoandro rehefa nilentika ny masoandro. Ny Alhambra any Granada dia miorina eo amin'ny havoana Sabika, eo anelanelan'ny loakan'ny renirano Darro sy Genil. Ity karazana toerana avo toerana ity dia mamaly ny fanapahan-kevitra fiarovan-tena sy ara-jeopolitika mifanaraka amin'ny toe-tsaina medieval.
Ny Alcazaba, ny Royal House, ny lapan'i Carlos V ary ny Patio de los Leones dia anisan'ny faritra malaza indrindra ao amin'ny Alhambra. Toy izany koa ny Generalife Gardens izay eo an-tampon'ny havoanan'i Cerro del Sol. Ny zavatra tsara sy manintona indrindra amin'ireo zaridaina ireo dia ny fifanatonana eo amin'ny hazavana, ny rano ary ny zavamaniry mampientanentana.
Tsy misy isalasalana fa ny Alhambra dia mitana toerana manana tombontsoa, ​​izay mitambatra sy mifanaraka tsara amin'ny manodidina azy ny soatoavin'ny rafitr'izy ireo. Mba hankasitrahana bebe kokoa azy dia tsara ny mankany amin'ny faritra Albaicín (Mirador de San Nicolás) na Sacromonte.
Nomena amin'ny fomba ofisialy amin'ny anarana hoe Paseo del Padre Manjón, fantatry ny besinimaro amin'ny anarana hoe Paseo de los Tristes izy io satria io no toerana nandalovan'ny filaharam-pandevenana teny amin'ny lalana mankamin'ny fasana. Any akaikin'ny renirano Darro, avy eto dia misy fahitana mahavariana amin'ilay Alhambra tsara tarehy. Iray amin'ireo izay mety ho karatra carte souvenir.
Izy no katedraly Renaissance voalohany ao amin'ny firenena ary ny faharoa lehibe indrindra ao Espana. Ny metatra toradroa maherin'ny 70.000 izay mamorona ny tampony dia tokony hanokan-tena ho an'i Santa María de la Encarnación, ary eo amin'ireo toerana midadasika dia afaka mahita trano fiangonana mihoatra ny folo ianao.
Ny fananganana azy dia nodidian'i Isabel I avy any Castile, izay naniraka ny tetikasa haorina eo ambonin'ny moske lehibe ao Granada aorian'ny Reconquest. Mijanona ao amin'ny Royal Chapel an'ny Katedraly ny fahafatesany ary miaraka amin'ny vadin'i Fernando El Católico vadiny, Juana zanany vavy ary Felipe El Hermoso vinantolahiny.
Amin'ny maha-te hahafanta-javatra azy, ny Katedraly Granada dia manana alitara avo boribory tsy mbola nisy toa azy teo amin'ny tantaran'ny maritrano sy ny fanangonana asa mahaliana indrindra nataon'ny mpanakanto Granada Alonso Cano.
Mba hitsidihana azy dia mividy tapakila ao amin'ny biraon'ny boaty Cathedral amin'ny vidiny 5 euro (ao anatin'izany ny audio guide. Ny fidirana amin'ny Royal Chapel dia vidiana misaraka amin'ny vidiny efatra euro.
Any amin'ny iray amin'ireo arabe be mpitsidika indrindra eto Granada, Carrera del Darro, no ahitantsika ny fandroana Arabo an'ny El Bañuelo namboarina ho an'ny fitsaharana sy ny fahadiovan'ny mponina ao Granada Silamo.
Nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ity toerana ity dia iray amin'ny taloha indrindra amin'ny karazany voatahiry any Espana sy tranobe sivily tranainy indrindra eto Granada. Taorian'ny Reconquest dia nisy trano tsy miankina namboarina teo ambonin'ny fandroana, izay izy io no mandeha amin'ny fidirana mankao amin'ny vala. Heverina ho fananana mahaliana ara-kolontsaina izy io izao.
Ireo mpankafy fanatanjahan-tena ary indrindra ny fanaovana ski dia hahita any Sierra Nevada ny toerana mety hankafizanao ny ririnina sy ny lanezy. Ny Sierra Nevada Ski and Mountain Resort dia miorina ao amin'ny Sierra Nevada Natural Park, ao amin'ny tanànan'ny Monachil sy Dílar ary 27 km fotsiny ny tanànan'i Granada.
Niorina tamin'ny 1964 izy io ary 108 kilometatra skiable no miparitaka amin'ny tehezana 115 (16 maitso, 40 manga, 50 mena, 9 mainty). Izy io dia manana tafondro 350 vita amin'ny lanezy, sekoly dimy ambin'ny folo amin'ny ambaratonga rehetra ary boribory ski marolafy snowpark miampita serivisy hafa.
Io no gara farany atsimo any Eropa ary avo indrindra any Espana. Ny kalitaon'ny oram-panala, ny fitsaboana tsy manam-paharoa amin'ny tehezany ary ny tolotra fialam-boly mifameno dia ny fitakiana lehibe indrindra ho an'ireo mpanao ski.
Ny gastr gastrikan'ny Granada dia iray amin'ireo manankarena indrindra ao Andalusia noho ny vokatra isan-karazany avy amin'ny ranomasina, ny lemaka lonaka ary ny tendrombohitra. Vokatr'izany dia manana boky fahandro matsiro feno tsiro sy endrika afaka manome fahafaham-po ireo felatanana mahafinaritra indrindra isika.
Any amin'ny faritr'i Granada, miavaka ny fomba fahandro toy ny lasopy amandy, tsaramaso malalaka misy ham, lasopy paprika, ovy, lasopy Granada, potipoti-kazo, loin eo afovoan-tany, laoka sifotra, moraga. lovia hafa.
Tapas dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hahalalana an'i Granada satria mamela anao hivezivezy sy hahita toerana tsy dia malaza izany, ary koa manandrana ireo karazan-tsakafo samihafa atolotra any amin'ireo bara sy trano fisakafoanana eo an-toerana. Tapas any Granada dia ny hankafy ny tanàna ary ho lasa Granada iray hafa vetivety.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Granada » Ny tanànan'i Granada dia voafidy ho tsara indrindra any Espana
Eny, efa hitako imbetsaka io ary niaina aho ary mijanona miaraka amin'i Santander na San Sebastián amin'ny maha tanàna ahy.
Hevitra 7 hankafizana Krismasy any Madrid amin'ny 2016